Qaraxyo kadhacay Beledwayne – Radio Daljir
Qaraxyo kadhacay Beledwayne
Luulyo 25, 2018 10:16 b 0
Wararka ka imaanaya magaalada Baladwayne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in sadex qarax xalay laga maqlay magaalada.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya qaraxyadan in lala beegsaday layrarka cadceedda ku shaqeeya ee waddooyinka.
Maamulka ayaan sheegin wax khasaare ah oo qaraxyadan kadhashay.
Ciidamada ammaanka ayaa wada baaritaano kusaabsan kooxihii falalkan gaystay.
Layrarka cadceedda ayaa qayb ka qaata bilicda iyo habeenkii in dadku wax arkaan, lamana oga sababaha ka dambeeya in la beegsado.
Madaxwayne Farmaajo oo abuuray Guddiga Dhaqaalaha Qaranka (Akhriso)
Abukar Arman: Yemen’s Fateful Twinship With Somalia